Mpanamboatra fonosana voaorina - orinasa mpamokatra fonosana sy mpamatsy voaforona ao Shina
SS304 316 fonosana metaly fonosana fonosana tilikambo
Ny fonosana vita amin'ny plastika vita amin'ny metaly dia manakaiky ny lovia vita amin'ny orifice miaraka amin'ny fantson-drano, izay mitazona ny toetra amam-bikan'ny famenoana metaly mitafo dia afaka manatsara ny fahamendrehana sy ny fanamiana famenon-dronono, mampiakatra ny fahombiazan'ny famindrana faobe. Fonosana plastika vita amin'ny metaly miaraka amina flux lehibe, fanoherana kely, ny tombony azo avy amin'ny avo, fanoherana ny fahaizan'ny plugging. Ny fonosana vita amin'ny plastika vita amin'ny vy dia misy amin'ny fitaovana maro karazana, ao anatin'izany ny vy tsy metaly 304, 316, 316L, Carbonsteels, Aluminium, varahina varahina sns. Mety amin'ny simika, zezika, fanadiovan-diloilo, indostrialy petrochemical, gazy voajanahary ary indostrialy hafa avo lenta fanamboarana mihombo. Ny endri-javatra: flux lehibe, fanoherana kely, fahombiazana avo.
Ny fonosana vita amin'ny vy lovia vita amin'ny vy dia fonosana voaorina, atambatra amin'ny takelaka manify vy izay manidina onja kely eo amboniny. Ny lovia vita amin'ny perforated corugated fonosana dia manana tombony amin'ny fihenan'ny fanoherana, ny entona fizarana sy ny tsiranoka fanatsarana, ny fahombiazan'ny avo, ny fiakarana avo, ny fanamafisana ny vokatra tsy mitongilana sns.
Fonosana metaly tariby metaly ho an'ny tsanganana distilasi
MMCP dia misy singa fonosana maro mitovy endrika geometrika. Ireo ravina mihosin-dronono napetraka ao anaty vatan-tsolika misy endrika mifanila antsoina hoe fonosana tilikambo mitafo. Ireo dia endrika fonosana mahomby indrindra miaraka amin'ny fanavahana fahombiazana imbetsaka avo kokoa noho ny fonosana malalaka.
Fonosana vy voarafitra vy
Ny fonosana vita amin'ny vy vita amin'ny vy dia vita amin'ny takelaka lamba vita amin'ny landy miaraka amina fantsom-boaloboka, ary ity takelaka famolavolana ity dia manana fironana 30 na 45, ny takelaka boribory mifanila dia mifanohitra amin'ny lalana. Rehefa mameno ny tilikambo ianao, ny mpanamboatra avy any ambony ka hatrany ambany dia voaravaka mitaingina.
Fonosana plastika vita amin'ny plastika
Ny fitaovana voalohany amin'ny plastika vita amin'ny plastika vita amin'ny plastika dia polypropylene. Miaraka amin'ny fampiroboroboana mitohy ny Indostria Maoderina, PVDF, fitaovana PFA koa natolotra teny an-tsena. Ity vokatra ity dia mihatra indrindra amin'ny asan'ny fitrohana sy ny fanapoizinana, toy ny asidra Hydrochloric, ny indostria asidra solifara, ny indostrian'ny entona, ny fanadiovana entona mandoto ary ny degasser desorption
Fonosana tilikambo vita amin'ny keramika
Ny fonosana tilikambo vita amin'ny keramika dia misy fonosana fonosana maro mitovy endrika amina geometrika. Ireo ravina mihosin-dronono napetraka ao anaty vatan-tsolika misy endrika mifanila antsoina hoe fonosana tilikambo mitafo. Ireo dia endrika fonosana mahomby indrindra miaraka amin'ny fanavahana fahombiazana imbetsaka avo kokoa noho ny fonosana malalaka. Izy ireo dia manana ny kalitaon'ny fihenan'ny tsindry ambany, ny fitomboan'ny elastika miasa, ny vokany fanamafisana farafahakeliny ary ny fitsaboana ranoka betsaka indrindra raha oharina amin'ny famonosana tilikambo sendra.
Famonosana vita amin'ny seramika vita amin'ny asidra sy Alkali fanoherana
Ny fonosana vita amin'ny seramika dia misy fonosana fonosana maro mitovy endrika amina geometrika.
Ireo ravina mihosin-dronono napetraka ao anaty vatan-tsolika misy endrika mifanila antsoina hoe fonosana tilikambo mitafo. Ireo dia endrika fonosana mahomby indrindra miaraka amin'ny fanavahana fahombiazana imbetsaka avo kokoa noho ny fonosana malalaka.
Izy ireo dia manana ny kalitaon'ny fihenan'ny tsindry ambany, ny fitomboan'ny elastika miasa, ny vokany fanamafisana farafahakeliny ary ny fitsaboana ranoka betsaka indrindra raha oharina amin'ny famonosana tilikambo sendra.